UBILL CALLAHAN: UMALUSI KWI-SHEEPSKIN VEST ALBUM REVIEW - IINDABA
Umalusi kwiVesti yeegusha
Umbalisi ongenambali ujonge nzulu kubomi basekhaya kwaye unikezela ngealbham ende ende efudunyezwe lilanga ebonisa umsebenzi wakhe.
Ukuphulaphula i-albhamu ye-Bill Callahan esetyenziselwa ukuthetha ukucinga yedwa. Umculo wakhe wawungekho malunga Ndedwa, kodwa le ndoda iyenza yaziva ingoyedwa kakhulu. Ilizwi lakhe le-baritone langxola kufutshane nasezantsi kwamalungiselelo akhe, kwaye lavakala linobuzaza, libi kakhulu: Ukuba ubungayihoyi le ayithethayo, ngewubhalise umculo wakhe kuzo zonke iintlobo zohambo lwengcuka eyedwa: ujonge ezintabeni, uhola wendlela ebusuku, ufunda iHemingway kuhambo lokuloba.
Kwi-albhamu yakhe ende, efudumeleyo yelanga, Umalusi kwiVesti yeegusha , UCallahan akavakali yedwa. Uvakala engqongwe. Enye into, umfazi amthandayo ayisiyiyo into yokungabikho ehlasela amaphupha amabi, njengoko wayenjalo nge-2009 Ngamanye amaxesha bendinqwenela ukuba sibe luKhozi ; Usendlwini yakhe. Unyana wakhe, unyana wabo, ukwigumbi elilandelayo. Izinto ozibonayo, izandi, amavumba, kunye nezinto ezenziwa ekhaya zihlala kuyo yonke indawo: iSesame Street ikumabonwakude kwigumbi lakhe lokuhlala, nakwigumbi lokulala, umfazi wakhe ubeka itawuli ebhedini ukuze baqale ukwenza uthando. Ngaba uCallahan ukrwelela ngqo ukuba uthetha ntoni ngale meko? Yenza: Litshonile ilanga, uxelelwa ngumfazi wakhe. Ndiyopha. Apho unayo: I-albhamu yokuqala yeBill Callahan eyakhankanya ixesha lesini.
Ubuhle emva kwempambano
Konke oku kunokuvakala kungathandeki okanye kungaqhelekanga, kodwa yintoni enomvuzo omkhulu ngayo Umalusi kwiVesti yeegusha Ngaba uCallahan ubhala ngolwazelelelo ngolu lonwabo, kwaye ulonwabo lwakhe lukhanyisa kangakanani kuthi. Ukonwaba yimvakalelo enzima yokufumana ubulumko, emva kwayo yonke loo nto — sihlala sigcina ubunzulu bokubona iimvakalelo esizama ngamandla ukuzisusa, ngethemba lokuba ukuba sizifunda nzulu ngokwaneleyo ngekhe siphinde sibe nazo. Ulonwabo? Ewe, ulonwabo sizama nje ukulonwabela, sithandaza ukuba singalufumani.
Iingcebiso ze-q ze-busta
Kwaye u-Callahan ubonakala engoyiki ukukhupha ulwaneliseko lwakhe ngokucinga nzulu ngalo. Ngandlela thile, uCallahan ngobuso obunobubanzi obuziimayile ebusweni bakhe unokuthetha okuninzi malunga nendalo iphela njengengcwaba, umfana owayekade enguye. Umsebenzi wakhe-ukusukela kwilinge lakhe lokuqala lomculo njengoSmog, ukuya kuguquko olucothayo kwimvumi-umbhali wengoma namhlanje- usisityebi kakhulu kwaye uzinzile ngenxa yezona zinto zibalaseleyo, kodwa Umalusi uziva njengeyona yakhe into ethile icwecwe elake laba lelona lifudumeleyo, elona lifanelekileyo kuye, mhlawumbi lelona linzulu. Lelona xesha lide kuye, ngokuqinisekileyo, lounging kamnandi kumacala omane evinyl, akukho nanye eyachithwa. Inqaku eliphakamileyo, elinomdla kwaye linzulu kwaye ligcinekile.
Isandi sikhululekile kunokuba siqhelekile kwiirekhodi zikaBill Callahan. Amalungiselelo agcwele kukuchukumisa inkanuko, njengee-bass ezimileyo ezijija ngolonwabo ekuphenduleni isibhengezo sikaCallahan, Unganditsalela umnxeba nantoni na ukuba nje ndinokucula 'Nditsalele nantoni na. Kukho i-beery honky-tonk lilt kwiNja eMnyama eLunxwemeni, ikatala enye ethe cwaka yentsimbi ekhala ngasemva. Kwi-Confederate Jasmine, uthelekisa ivumba leentyatyambo kunye nenqaku elithambileyo elivela kwiphondo elifakelweyo-umfanekiso ochanekileyo nothandekayo, kunye nokususa ngokugqibeleleyo isandi kunye nemvakalelo yealbham.
Yirekhodi eliphilileyo kunesibini sokugqibela, ezele kukutya okuthe cwaka emaphethelweni. Yintoni eza emva koQinisekiso lweendawo ezingaphambili zeekatala ezimbini ze-acoustic, ukuthathwa ngomnwe omnye kunye nokuphinda-phinda i-octave ephezulu, ukunyuka entanyeni ukuyokufumana ukujika okuncinci okungavakaliyo. Ezi zikatala zimbini azingqinelani ngokuqinileyo, kwaye ezinye zezo solos zincinci ziyavakala ukuba zonakele, njengesidlali somdlali ngaphambi kokuba baqonde ukuba badlale ntoni, kodwa amanqaku atshisiweyo adibanisa ubume bovuyo oludumbileyo kwiingoma. Iirekhodi zakhe zihlala zivakala njenge-monastic kunye ne-spare, kodwa le irekhodi yegumbi lokuhlala, lenziwa ngaphakathi kwaye lijikeleze igumbi eligcweleyo.
Yonke inqaku, nokuba isandi esizenzekelayo siphendula njani ngokukhawuleza kwaye kwangoko kwilizwi likaCallahan, elihlala lingoyena mntu uphambili. Andizange ndicinge ukuba ndiza kuyenza le ndawo indala / Indlu endala, imoto yemodeli yakutshanje / Kwaye ndinomfazi wam amaphupha am, ucula ngokuQiniseka, kwaye ngokungathi uyangcangcazela kancinci kukungathandeki kwayo yonke le nto, Ingoma yehla ngokufutshane kwizikhetho ezimbini ezincinci kumagama athi amaphupha. Ulwaneliseko, emva kwayo yonke loo nto, unokuziva ubuthathaka ngokothusayo, ngakumbi xa ukugcwele ngokupheleleyo. Uthando lokwenyani alungomlingo, luqinisekile / Kwaye yintoni eza emva koqinisekiso? uyazibuza. Akaphenduli.
UCallahan ubhala ngolwaneliseko lwakhe ngendlela efanayo ecacileyo, yethenda, kunye ne-elegiac eyenziwe nguLeonard Cohen. Nasiphi na isilumko esitshiswe lilanga kwindawo yokuhombisa inokukucebisa ukuba uphile ngoku-kuyacaphukisa, ukuba ingcebiso elungileyo kwezobuchwephesha. Kodwa uCallahan uvavanya obo bulumko ngokusondeleyo kwaye uyayifumana le nto: Ewe, elidlulileyo belisoloko lixoka kum / Ixesha elidlulileyo alizange lindinike nantoni na ngaphandle kweblues, ucula kwi-Young Icarus.
Iiklasi zokubhala zibiza lo msebenzi kukungabi nantlonelo kodwa ayisiyiyo kwaphela indlela yokufundisa njengomkhwa wengqondo, indlela ekhethekileyo yokubona umhlaba: Sizimpukane kundlebende, kwaye silungile kwinto esiyenzayo, uqukumbela Ingoma yenye yezandla zomsebenzi wobugcisa on Umalusi . Kuyo, uCallahan ukwinqwelomoya, ebhala malunga neengcinga ezityibilika ngaphakathi nangaphandle kwentloko yakhe njengoko inqwelomoya inyuka iye kwiinyawo ezingama-30,000. UMark Kozelek, ongomnye oza kuba yimbongi yesiqhelo, unokujonga kwisitya senqwelomoya esitywinwe ngumoya kwaye azibuze malunga nexesha lokugqibela awalinikwa ngalo ipasta primavera, kwaye yeyiphi i-pro wrestler esandula ukubhubha; UCallahan uyazibuza ngomda ophakathi kokuzalwa nokufa, malunga namafu aphaphazelayo kunye nokukhanya okubonwe ngabazelweyo nabafayo: Ndavuka nge-747 ndibhabha ngemifanekiso ethile yezulu, uqala, ngaphambi kokuba asinike oku: Ngaba igazi xa wawuzalwa kwaye igazi lasulwa emehlweni akho / Oku kufanele ukuba kukukhanya okubonileyo okushiye usakhala / Kwaye oku kufanele ukuba kukukhanya okubonileyo phambi kwamehlo ethu kungafihla intsingiselo yokwenyani / Kwaye oku kufanele ukuba kukukhanya ubone kanye xa uhamba.
UCallahan akanguye umbhali wokuqala ukuba achonge, kubunzulu obunzulu kunye nokuzinza komphefumlo oza nolwaneliseko lokwenyani, inqaku lokufa. Kwicala lesine kunye nelokugqibela lealbham, ukufa kuyasondela kuyo yonke into, ngaphandle kokwenza mnyama imbonakalo yomhlaba: Ukufa kuhle, uCallahan usixelela. Sivalelisa kubahlobo abaninzi abangenakulinganiswa. Enye yeengoma zokugqibela isiciko seCarter Family's Intlambo eyiLonesome , Ingoma ngokubhekisele kukujongana noloyiko lokuphela kwakho wedwa. Kodwa uCallahan uguqula amagama ukuze iivesi zimalunga nabo bonke abathandayo-ayisiyiyo kuphela ukuba ahambe yedwa kuloo ntlambo iyodwa, kodwa kunjalo nakunina noyise. Sonke sabelana ngale ndawo, uyaqonda. I-dissonance yokuqonda, mhlawumbi, ngaphezulu kokuphazamiseka, ukucinga ukuba iyagcinwa ngaphezulu kwepuzzle ekufuneka isonjululwe. Njengoko uCallahan esongeza iivesi ezintsha, ebulala amalungu amatsha osapho ngalo lonke ixesha-Udade wethu uye wahamba kuloo ntlambo iyodwa-ingoma iyadumba emva kwakhe. Amazwi abasetyhini avela ngasemva kwakhe, njengepiyano kunye neegitare ezahlukeneyo, zonke zizulazula ziziva zinjenge-curtain-call. Mhlawumbi ngalo mzuzu, ucebisa ukuba, asizukuhlala sodwa njengoko sicinga.
tyler umdali hey wena
i-American gangster uJay z
ukusebenza ngokupheleleyo kwe-beyonce coachella
ulwandle kunye nekhekhe